musha Oceania Chris Hemsworth Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anotumidzwa zita remadunhurirwa rekuti “KIP“. Chinyorwa chedu chinokupa kuzara kuzere kweChris Hemsworth Yehucheche Nyaya, Hupenyu, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakanga achiri mudiki kusvika paakatanga kufarirwa.
Hupenyu hwepakutanga uye Kumuka kwaChris Hemsworth.
Hongu, munhu wese anomuziva nebasa rake rekutungamira mumamuvhi- Thor, Avengers, nezvimwewo, Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezvehupenyu hwaChris Hemsworth hunonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Chris Hemsworth Childhood Nyaya:
Chris Hemsworth akazvarwa pazuva re11th raNyamavhuvhu 1983, kuna amai vake, Leonie Hemsworth nababa vake, Craig Hemsworth muMelbourne, iro guta rechipiri-rine vanhu vakawanda uye guta guru redunhu reAustralia reVictoria. Chris aiyevedza kwazvo semwana.
Mune vazhinji vateveri vakafunga, mutambi weAvengers pamwe haana kumboziva panguva ino, danho raaizoenda nemasimba makuru.
Chris Hemsworth Yemwana Mufananidzo- Aive akanaka uye anonakidza mwana uyo aisamboziva danho raaizoenda nemasimba makuru.
Chris akauya pasi pano semwana wechipiri pakati pevanakomana vatatu (Ruka naLiam) akazvarwa kuvabereki vake vakanyanya kudzidza.
Tsvaga pazasi, pikicha yevabereki vaChris Hemsworth- baba vake vakwegura vane makore makumi manomwe, uye amai vake vangangodaro vari muma70.
Sangana nevabereki vaChris Hemsworth- Baba Vake (Craig) naamai (Leonie).
Mhuri yaChris Hemsworth Kubva: Vabereki vaviri vaChris Hemsworth ndeveAustralia nekuda kwekuzvarwa. Sekureva kwekutsvaga, mhuri yaChris Hemsworth kwakaburitsa pachena kuti ane chizvarwa cheChirungu, cheScotland neGerman.
Chris Hemsworth Mhuri Yacho:
Akazvarwa pakati pemhuri dzakapfuma kwazvo muAustralia. Mudiki Chris akarererwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure yakakwidziridzwa nababa vake vaive gwara-rezvemagariro.
Kune rimwe divi, amai vake vakanaka vaive mudzidzisi weChirungu. Pamwe chete, vese vabereki vakashandisa zvishoma zvavaive nazvo kuchengetedza mhuri yavo kuenda.
Zvichida iwe hauna kumboziva, kuita mumutambo wemwana kwaisave kwake kwekutanga kutamba. Semukomana mudiki, Chris Hemsworth aida kufambisa uye kutamba nhabvu.
Achiomerera kune yakazotevera, Chris pane imwe nguva muhupenyu hwake hwepakutanga aida kuita basa munhabvu. Kuva mutambi wenhabvu kwakatemwa kupfupika nekukuvara kwepafudzi.
Baba vaChris Hemsworth Craig vachitora vanakomana vavo Luke naChris paSurfing kumashure uko kuMelbourne.
Makore Ekutanga aChris Hemsworth:
Mudiki Chris nemadzikoma ake vakarererwa nevabereki vavo muBulman, guta rechiteshi chemombe muNorthern Territory yeAustralia.
Makore mashoma mushure mekuzvarwa kwake, mhuri yaChris Hemsworth yakatamira kumaodzanyemba-kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweMelbourne, pachitsuwa chinonzi Phillip Island. Ikoko, Chris anofara akapedza makore ake ehudiki ehudiki pamwe nehama dzake.
Chris Hemsworth akafananidzirwa pamwe nehama dzake muMelbourne Neighborhood.
Dzidzo yaChris Hemsworth:
Vabereki vaChris Hemsworth vakamuti anyore kuRingwood Primary School kwaakapedza dzidzo yake yepuraimari. Iyo ramangwana bhaisikopo nyeredzi paakapedza kudzidza akapfuurira kuHeathmont College muHeathmont, Victoria yedzidzo yake yechikoro chepamusoro.
Chris akawana rudo rwake rwekuita achiri kuchikoro chesekondari. Paaive kukoreji, aive chikamu cheboka remutambo. Kune mwana akangwara, kutamba mitambo yakawanda yemitambo kwakamutsa kufarira kwake pakukosha kwekuita mutambi.
Chris Hemsworth akaenda kuRingwood Primary School uye akazoenda kuHeathmont College iri muAustralia.
Chris Hemsworth Biography - Upenyu Hwepakutanga Asati Mukurumbira:
Chimwe chechokwadi chaChris Hemsworth chausingazombonzwa nezvacho chine chekuita nezvaakaita asati azviita zvakakura muindasitiri yemamuvhi.
Waizviziva here?… Mutambi akanaka akaita mabasa akaderera asati aita firimu rake rekutanga (Thor).
Basa raChris rekutanga kwaive kuchenesa mapombi ezamu, rimwe raakaita aine makore gumi nemana. Nyanzvi yemuvhi akataura zvinotevera paakabvunzwa nezve hupenyu hwake hwepakutanga pamberi pemukurumbira webasa. Mumashoko ake;
“Ini ndaifanirwa kutsvaira, uye kuunganidza, nekugadzirisa pombi dzemazamu dzairojawa kumafamasi. Muchina waipinda wakavharwa mumukaka wakaomeswa, uye ndinenge ndiripo nebhurosi rezino, ndichiikwesha nekukorobha ”.
Shure kwaizvozvo, mushure mekuita mabasa akaderera, Chris akatanga kuita mumabasa madiki mumitambo yeTV zvichitevera kupedza kwake kukoreji. Waizviziva here kuti Chris akambotamba King Arthur muCanada / Australia yekufungidzira akateedzana Guinevere Jones.
Mufananidzo waChris Hemsworth achitamba King Arthur mune yeAustralia TV Series.
Tevera basa rake kusvika kumatunhu akakwirira zvakaonekwa sekudikanwa kwaChris. Nyeredzi inomuka mushure mekuona tarenda rake uye magumo akaenderera kuAmerican Dialect ku Screenwise Film & TV Chikoro. Ichi chikoro chakaitirwa maActors muSydney Australia.
Kuchikoro, akaongorora mumutambo weAustralia TV mutambo wekutanga uye Away. Nehurombo, rake raaida pakupedzisira rakaenda kune mumwe mutambi weAustralia Jason Smith, ichiita kuti Chris aoneke seyakauya muDhivha.
Chris Hemsworth akazvivakira basa rake muCameo Chitarisiko muImba uye Away TV Series.
Chris Hemsworth Bio - Nzira yeku Fame Nhau:
Kutsunga kwaHemsworth kwekubudirira kwakaita kuti akwikwidze mumwaka wechishanu weKutamba neNyeredzi Australia.
Kubatana neanotamba mutambi Abbey Ross hazvina kushanda sekuronga. Chris akabviswa zvisinei nekuisa chakakomba kuita pachiratidziro.
Chris paDanho remwaka wechishanu weKutamba pamwe chete nemudiwa mudiwa Abbey Ross muna 2006.
Asina kukanda mapfumo pasi pazviroto zvake, Chris Hemsworth akaona rombo rakanaka mushure mekuita kwemagetsi mufirimu yekunyepedzera yesainzi Star Trek.
Ichimukurudzira kuita stardom, iyo bhaisikopo yakaita kuti kuvepo kwake kunzwike kutenderera pasirese. Zvekare, iyi bhaisikopo yakapa Chris iro rakakodzera gedhi rekuzvizivisa kuUS uye yeAustralia indasitiri yemamuvhi.
Chris Hemsworth Akafananidzirwa mune Chiitiko che Star Trek Movie.
Chris Hemsworth Biography - Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kushandisa Star Trek kuzvizivisa iye kuindasitiri yemamuvhi yakanga isina kukwana. Chris akaenderera mberi nekuedza kuzviita mukurumbira. Iwe haugone kutaura nezvehupenyu hwaChris Hemsworth usingataure izwi rekutiThor".
Hongu!, Shasha yeAustralia yakaridza gamba guru "Thor" muMarvel Cinematic Universe, iyo firimu rakagashira wongororo dzakanaka kubva pasirese. Kuratidzwa kwaChris kwaMwari weTinhira kwaireva zvakawanda kunyika yake, vateveri uye mhuri.
Chris Hemsworth Akafananidzirwa saSuper Hero Thor mune yekuita bhaisikopo.
Panguva yekunyora Chris Hemsworth Biography, iyo ngano yemuvhi yakanga yasimbisa chinzvimbo seimwe yeanokurumidza kusimukira vatambi pasi pano.
Basa rake rakakodzerwa muThe Avengers film series- imwe yematanhatu makuru anoonekwa senge shanduko huru yebasa rake kusvika parizvino.
Waizviziva?… Iyo Avengers firimu nhepfenyuro yakagadzira kubudirira mubhizimusi, ichikurisa kudarika $ 1.519 bhiriyoni pasirese.
Chris Hemsworth akafananidzirwa pamwe chete nemamwe Magamba muThe Avengers Team
Zvekare, nekukasira kumberi kunguva yekunyora, Chris ari pachinzvimbo chemakumi maviri nenhanhatu muForbes World Yakanyanya-Kubhadharwa maArsistor runyorwa nemari inofungidzirwa kuwana $ 24 mamirioni.
Mukomana mukuru wemamuvhi akahwina mibairo mizhinji panguva yese yekuita kwake basa, inozivikanwa pakati pavo ndeiyi; the Vana Sarudzo Mubairo, Teen Sarudzo Mubairo, Peoples Sarudzo Mubairo, uye MTV Movie Award.
Chris Hemsworth Vasikana Shamwari (Kare Hushamwari):
Chris Hemsworth akatanga kufambidzana nemusikana mutambi Isabel Lucas mushure mekuita nyeredzi pamwechete muAustralia sipo opera Kumba uye Kure. Isabel mutambi weAustralia uye modhi akazvarwa pazuva re29th raNdira 1985.
Iye anozivikanwa zvakanyanya nebasa rake saAlice muTransformers: Kutsiva kwevakadonha. Waizviziva here?… Musikana waChris Hemsworth akamusiya panguva yaakatamira kuLos Angeles mu2008.
Uyu ndiye musikana wekare waChris Hemsworth, Isabel Luca.
Mushure mekunge Chris Hemsworth atadza hukama, iye mu2010 akatanga kufambidzana naElsa Pataky, mutambi wechiSpanish & modhi.
Elsa anozivikanwa nebasa rake saElena Neves muThe Fast uye Furious franchise. Kuzvarwa pazuva re18th raJuly 1976 zvinoreva kuti ane makore manomwe mukuru kuna Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth Mukadzi:
Chris uye mutambi wechiSpanish Elsa akawana chakavanzika chehukama hwavo mwedzi mishoma mushure mekunge vasangana mu2010.
Vaviri ava vakaita hukama hwavo kuruzevha munaGunyana 2010, gore rimwe chete ravakatanga kufambidzana. Vanodanana (Elsa naChris) panguva yehukama hwavo vaive vatoziva kuti vakatemerwa kuroora.
Chris Hemsworth mushure memwedzi mishoma yekusangana nemukadzi wake, Elsa Pataky.
Vabereki vaChris Hemsworth pachikumbiro chake vakabvumidza muchato wake naElsa Pataky mwedzi mitatu chete mushure mekunge atanga kufambidzana naye. Mavhiki gare gare, vaviri vacho vakasunga pfumo panguva yezororo kuIndonesia, kutenderera zororo reKisimusi.
Maererano ne Ipapoetline webhusaiti, pakanga pasina yakanyanya kuronga, asi vaviri vacho vakaona kuti yaive nguva yakakodzera kuti varoore.
Chris naElsa Pataky vaive nemuchato wakabudirira mushure memwedzi mitatu yekufambidzana.
Chris Hemsworth Vana:
Kubvira pavakachata muna 2010, murume nemukurumbira vakakomborerwa nevana vatatu. Vane mwanasikana, India Rose uyo akaberekwa musi wegumi nemana waMay 11, uye mapatya evarume, Sasha naTristan avo vakaberekwa pazuva regumi nemana raKurume 2012.
Chris Hemsworth Mhuri:
Mhuri yeAvengers nyeredzi inofema vanhu vakadzidza uye vakangwara vanhu. Muchikamu chino, isu tinotanga kukupa iwe zvimwe chokwadi nezvevabereki vaChris Hemsworth, uyezve dzimwe nhengo dzemhuri.
Nezve baba vaChris Hemsworth:
Baba vaCraig Hemsworth ndiAustralia nekuda kwekuzvarwa kwake. Akazvarwa kuvabereki vari veAustralia nemadzitateguru ekuEurope.
Nebasa, Craig Hemsworth muchengeti wezvemagariro, zvakare munhu akangwara ane hunhu hunoshamisa. Kutenda mukurumbira wemwanakomana wake, Craig akazviona achishambira kupinda mune mukurumbira mukurumbira.
Nezve amai vaChris Hemsworth:
Leonie Hemsworth amai vaChris Hemsworth. Iye anoita kunge akazvarwa mukunopera kwema1950 kana kutanga kwema1960. Achitora basa remwanakomana wake, Leonie mutambi wemuAustralia pamwe nemudzidzisi, bhizimusi rinova iro basa rake rekare.
Chimiro chaLeonie Hemsworth chemukurumbira chakakurumbira muUS neAustralia zvese nekutenda nekuva amai vevatambi vane mukurumbira- Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, naLuke Hemsworth.
Nezve Chris Hemsworth's Mukuru Hama Hama Luke: Luke Hemsworth (akazvarwa musi wa5 Mbudzi 1981) mutambi weAustralia anozivikanwa nemabasa ake saNathan Tyson mumutambo weTV "Vavakidzani". Iye anozivikanwa zvakare nebasa rake saAshley Stubbs muHBO sci-fi akateedzana "Westworld".
Nezve mwana waChris Hemsworth Hama Liam:
Liam Hemsworth (akazvarwa musi wa13 Ndira 1990) mutambi weAustralia anozivikanwa zvakanyanya kuve murume mukuru Miley Cyrus. Akaridza chinzvimbo chaJosh Taylor musipo opera "Vavakidzani" uye Marcus mune yeterevhizheni yevana "The Elephant Princess".
Nezve hama dzaChris Hemsworth:
Kufamba kubva kuvabereki vaChris Hemsworth uye vanun'una, isu tinopawo kwamuri hama dzake. Zita rasekuru vaChris zita rake ndiMartin van Os. Iyo yekufambisa superstar zvakare ine babamunini vane zita rekuti Rod Ansell, zvakare tete vanonzi Joanne van Os.
Chris Hemsworth ane vana vamai vatatu uye vanoenda nemazita; Rose Hemsworth, Holly Hemsworth, naElla Hemsworth. Chris ane zvakare muzukuru anonzi Alexandre Hemsworth.
Panguva yekunyora, hapana zvinyorwa zvesekuru nasekuru vake. Zvinoita sekunge Makunakuna eiyo Avenger nyeredzi vakaita zvese kuyedza kuchengetedza kwavo kwega hupenyu
Chris Hemsworth Hupenyu hwepamoyo:
Kusvika pakuziva Hupenyu hweChris Hemsworth kwaizokubatsira iwe kuti utore mufananidzo uri nani wake kubva pane iyo bhaisikopo rehupenyu hwake iro iwe raungave uchiziva nezvazvo.
Hemmy mumwe munhu anoedza zuva nezuva kuti abudirire chero chinhu chaanoitira hunyanzvi uye nemanzwiro. Ane hunhu hwakanaka hwekusetsa izvo zvinoita kuti kubatana nevamwe vanhu kuve nyore- hazvishamise kuti iye anobudirira Hollywood mutambi.
Chris Hemsworth ane hunyanzvi, ane rupo, akavimbika, anotonga. Anozvivimba, akanaka uye akaomarara zvakanyanya kuramba.
Kure nekuita, Chris anofarira kufambisa pamusoro panguva yake yekuzorora. Hazvishamise kuti akakurira muAustralia uko kufashisa kuri kutamba kwenyika.
Hemmy anoda Surfing, mutambo unova unofanirwa kumazororo. Senzira yekuratidza kuzvipira kumutambo, akambotaura nezvekuda kudzidzisa vana vake.
Chris Hemsworth Mararamiro:
Senge panguva yekunyora Chris Hemsworth's biography, ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 130 Million.
Kwakatangira hupfumi hwaChris Hemsworth kunobva mumafirimu aanogadzira, zvibvumirano zvake uye bhizinesi. Pasina kupokana, ndiye mumwe wevatambi vanobhadharwa zvakanyanya muHollywood.
Hupfumi hwaChris Hemsworth hwakaunganidzwa zvakanyanya uye hupenyu hwake hunomuisa pakati pevanozivikanwa veHollywood vanorarama hupenyu hwekunze.
Tiye ari kusimukira nyeredzi ane mega-mansion inokwana madhora makumi maviri emamirioni muByron Bay Hinterland. Imba yeHemsworth ine zvivakwa zvinoyevedza zvinosanganisira: dziva risingaperi, spa, kamuri rema cinema, kamuri yekushambadza, imba yesauna, imba yemhepo, imba yemadhaka uye kamuri yemitambo ine bhawa.
Vakakurumbira mota kwete; Audi Q7 ($ 90,500), Cadillac SRX, Acura MDX uye Cadillac Escalade ($ 200,000) ndizvo zviri Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Chris Hemsworth biography, heano zvimwe zvisinganyatso zivikanwe chokwadi izvo zvichakubatsira iwe kuti unzwisise mufananidzo uzere weiye mutambi.
Chokwadi # 1- Kutanga pachokwadi chaChris Hemsworth, isu tinokuudza iwe nezve ake mahombe mhasuru kuwana. Waizviziva here?
Sekureva kwemutambi, kusamira-kwekudya chikafu (kwete kusimudza uremu) ndiyo yaive kiyi kune ake makumi maviri ematani huremu.
Chokwadi # 2- Chitendero chake: Vabereki vaChris Hemsworth havana kuita kunge vakamurera kuti anyatsotevedzera chero chitendero.
Zvichitaurwa zviri nyore, haasi uye haana kumbobvira ari munhu wemweya. Kunyanya zvakadaro, Chris haasati ambotaura nezve ake apfuura echitendero izvo, kana anga aine.
Chokwadi # 3 tattoos: Chris Hemsworth ane akati wandei maatatoo pamuviri wake. Ane tattoo inoenderana nemukadzi wake, Elsa iyo inonyora zita revana vavo India, Tristan, uye Sasha mune runyorwa rweRunic.
Chokwadi # 4 Kusvuta uye Kunwa: Chris Hemsworth anorova apo neapo uye anonwa zvakare, kunyangwe izvi Chris achiri kuita shuwa kuti anogara aine hutano nguva dzese.
Chokwadi # 5- Chris Hemsworth paudiki Nickname: Pekupedzisira pachokwadi chaChris Hemsworth, tinokupa imwe nzwisiso yezita rake remadunhurirwa.
Paaive mudiki, Chris Hemsworth akatambura kuti ataure zita rake. Kunyangwe akaedza kakawanda kuti "Christopher", akapedzisira ataura chimwe chinhu chainzwika senge, "Kiptoder". Izvi zvakakonzera kuti vavakidzani nedzimwe nhengo dzemhuri vamupe zita remadunhurirwa rehucheche "Kip ”.
Wiki Zvekare Base:
Muchikamu chino chekupedzisira cheChris Hemsworth's Biography, iwe uchazoona yake Wiki ruzivo rwekutanga. Chinonyanya kukosha, izvi zvinobatsira iwe kuti uwane akati wandei echokwadi chaTravis Scott nenzira yakapfupika uye yakapusa.
Zita rizere Christopher Hemsworth
Nzvimbo yekuzvarirwa Melbourne, Victoria, Australia
Vabereki zita Craig Hemsworth (Baba) naLeonie Hemsworth (Amai)
Imba yeguta Phillip Island, Victoria, Australia
Children India-Rose (akazvarwa 2012) uye TWINS- Sasha Hemsworth (akazvarwa 2014) naTristan Hemsworth (2014)
Sekuru sekuru Martin van O
sekuru Rod Ansell
Amai Joanne van Os
Niece Rose Hemsworth, Holly Hemsworth naElla Hemsworth
Ex-girlfriend Isabel Lucas
dzidzo Ringwood Primary Chikoro uye Heathmont College
Networth $ Miriyoni 130
Hama Luke Hemsworth (mukuru) naLiam Hemsworth (mudiki).
urefu 1.9 m kana 6 ′ 3 ″
Kwekupedzisira gumi Mahara Movie (1) Vatsoropodzi: Endgame (2) Vatsoropodzi: Infinity Hondo (3) Rush (4) The Avenger (5) Thor Ragnarok (6) Star Trek (7) Vtsiva: Zera Rekupedzisira (8) Nguva Dzekupedzisira PaEl Royale ( 9) Iyo Kabhini MuMatanda (10) Thor
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Chris Hemsworth Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!